Free Nay Phone Latt: 2008
နေဘုန်းလတ်ဘလော့ ဒိုမိန်းသက်တမ်းပြည့်သွားဖြင့် ကြည့်ရှုမရနိုင်
အင်းစိန်ထောင်တွင် မတရားထိမ်းသိမ်းခံထားရသော ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်၏ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဒိုမိန်းဖြစ်သော www.nayphonelatt.net မှာ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တစ်နှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ခတ္တရပ်ဆိုင်းကာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမရနိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။ ယခင် Blogspot လိပ်စာဖြစ်သော www.nayphonelatt.blogspot.com ကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းဖြစ်သော www.nayphonelatt.net သို့ redirect လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ နှစ်စေ့သွားသဖြင့် အမြန်ဆုံး သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ နေဘုန်းလတ်သာ သိရှိသဖြင့် အခြားမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့်လည်း ကူညီရန်ခက်ခဲနေသောကြောင့် အချိန်အနည်းငယ် ကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်သည်။ နေဘုန်းလတ်၏ စာဖတ်ပရိသတ်များက ဘလော့ကို စစ်အစိုးရဘက်တော်သားများက တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်စွာ မေးမြန်းမှုများရှိခဲ့ပြီး IT နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများက ဒိုမိန်းသက်တမ်းစေ့သွားခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ပေးသည်။
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် ၂ ၊ အတွဲ ၃ တွင် နေဘုန်းလတ်၏ ကဗျာနှင့်ဆောင်းပါးပါဝင်
မတရားအကျဉ်းချခံထားရသော ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ် အယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူလျက်ရှိသော သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၂ အမှတ် ၃ ကို အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ဖြန့်ချီခဲ့ရာ ၄င်း၏ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါဝင်လာသည်ဟု သိရသည်။
နေဘုန်းလတ်၏ “ဝေါဟာရတစ်ခု၏နောက်ကွယ်” ဆောင်းပါးမှာ စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြဖူးသော ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး နေဘုန်းလတ်၏ ပင်ကိုရေးဟန်အတိုင်း လူငယ်တို့အတွက်၊ ပညာရေးအတွက် စေတနာဖြင့် ထောက်ပြတိုက်တွန်းချက်လေးများကို ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ကဗျာကိုတော့ နေဘုန်းလတ်ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးစဉ် သံလွင်အိပ်မက်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ နှုတ်ဖြင့်အလွတ်ရွတ်ဆိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေဘုန်းလတ်၏ ဆောင်းပါးကို http://www.thanlwin.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=189 နှင့် ကဗျာကို http://www.thanlwin.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=178 တို့တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်တိုင်ရေး, သတင်း, သူ့လက်ရာ
ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခံထားရသော Blogger နေဘုန်းလတ် အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၂) ၊ အမှတ် (၂) ကို ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက်က ဖြန့်ချီလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ခေတ်မီအဆင့်မြှင့်ထားသော သံလွင်ဝက်ဘ်ဆိုက် (www.thanlwin.com) မှ ဖြန့်ချီလိုက်သော အဆိုပါ မဂ္ဂဇင်းကို အတွဲ(၂) ၊ အမှတ်(၁) အပြီး သုံးလအကြာတွင် ထပ်မံဖြန့်ချီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ၊ ဘလော့ဂ်ဂါ (၃၀) ကျော်တို့၏ စာပေလက်ရာများသာမက ဓါတ်ပုံ၊ ကာတွန်း၊ အင်တာဗျူးများကိုလည်း ယခင် သံလွင်အိပ်မက်များနည်းတူ ထည့်သွင်းထားသည်။ ယခုအပတ်တွင် နေဘုန်းလတ် ကိုယ်တိုင်ရေး ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လည်းပါဝင်သည်။ “သီချင်းငှက်၏ စေညွှန်ရာ” ရှိ အဆိုပါဆောင်းပါးမှာ သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၃) တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော်လည်း နေဘုန်းလတ်၏ ဆန္ဒအရ ထပ်မံဖော်ပြလိုက်သည်ဟု မဂ္ဂဇင်းအတွင်းတွင် ရေးသားထားသည်။ နေဘုန်းလတ်က ထောင်ဝင်စာတွေ့လာသောမိခင်ကို ၄င်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေများကို ဖော်ပြပေးနိုင်သော ထိုဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးရန် သံလွင်အိပ်မက်အား အကြောင်းကြားစေသည်ဟု သိရသည်။ နေဘုန်းလတ်ကို ဖမ်းဆီးထားသည်မှာ ၆ လ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း တိကျသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ပုဒ်မအမျိုးမျိုးပြောင်းတပ်ကာ ချုပ်နှောင်ထားဆဲပင်ဖြစ်သည်။
မွေးနေ့မှာ မင်္ဂလာ ရှိပါစေ သူငယ်ချင်း နေဘုန်းလတ် (By ခွန်မြလှိုင်)
(စာကို ခွန်မြလှိုင် (http://khunmyahlaing.blogspot.com/2008/07/blog-post.html)မှ ရယူသည်)
Labels: ကဗျာ, ခံစားချက်, ပေးစာ, မွေးနေ့
နေဘုန်းလတ်မွေးနေ့အတွက် သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းနှင့် မွေးနေ့ပွဲပြုလုပ်
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ဘလော့ဂ်ဂါ စာရေးဆရာ နေဘုန်းလတ်၏ မွေးနေ့အားရည်စူး၍ အဆိုပါနေ့ ညနေပိုင်းက စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Toa Payoh ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂ်ဂါများက သင်္ကန်းနှင့် နဝကမ္မအလှူငွေများ ကပ်လှူပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ လှူဒါန်းပေးခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုငယ်(မန္တလေး)က “ သူ့မွေးနေ့မှာ သူ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူရှိမနေလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုလှူဒါန်းပေးတဲ့အတွက် သူ ကျန်းမာဖို့၊ လွတ်မြောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဆုတောင်းပါတယ်” ဟု ပြောကြားသွားသည်။ ဇွန်လ ၂၈ ရက် မနက်ခင်းတွင်လည်း ရန်ကုန်ရှိ သူငယ်ချင်းဘလော့ဂ်ဂါများမှ နေဘုန်းလတ်အတွက် ရည်စူးကာ ငါးများ၊ ခိုများ၊ စာကလေးများလွတ်ကာ ကောင်းမှုပြုပေးခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ညနေတွင်လည်း နေဘုန်းလတ်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို စင်ကာပူအခြေစိုက် သံလွင်အိပ်မက် Online မဂ္ဂဇင်းမှ ကျင်းပခဲ့သည်ဟုလည်း သိရသည်။ နေဘုန်းလတ် အယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူလျက်ရှိသော သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်းမှ အခြား လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အယ်ဒီတာများက နေဘုန်းလတ်အတွက် အမှတ်ရစရာများကို ပြောကြားသွားကြသည်။ အဆိုပါ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့သည် နေဘုန်းလတ်ကို ဖမ်းဆီးသွားသည့် ၅ လပြည့်နေ့လည်းဖြစ်သည်။
Happy Birthday N.P.L ဟု ရေးသားထားသော မွေးနေ့ကိတ်မုန့်
Labels: သတင်း, မွေးနေ့
အမှန်တော့ကျွန်တော့် အကိုလိုခင်တဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ် happy birthday ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ...မ၀ံ့မရဲဖြစ်မိပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းလေးဆို ညနေ ကျရင် ၁၉လမ်းသွား၊ တ၀ါးတ၀ါး တဟားဟား စနောက်ကြ စားကြသောက်ကြရင်း မွေးနေ့ပွဲ လုပ်နေရမယ့် နေ့ပါ။ နံရံတဖက်ခြား ရပ်ဝန်းက ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ အကို ယုံကြည်တဲ့ လမ်းမှာ ရှေ့ဆက် ဆန္ဒပြည့်ဝ ပြီး အောင်မြင်ချမ်းမြေ့ပါစေ လို့ ညီငယ် အလေးအနက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ တကယ့် ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့ကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိ ကြုံဆုံပါစေ။
(စာကို မင်းယွန်းသစ် (http://www.minnyoonthit.net/2008/06/happy-birthday.html)မှ ရယူသည်)
Labels: ခံစားချက်, မွေးနေ့
စိတ်ကို အလျားလိုက် ထိုးသွင်းလိုက်တော့
လူနာဆောင် အမှတ်ခြောက်ကို တွေ့တယ်
အရိပ်တွေ သေနေတဲ့ နံရံအက်ကြောင်းတွေ ကြားက
စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး .. မင်း ဘာရွေးမလဲမေးရင်
ဒါပေမယ့် တော်စတွိုင်း မဟုတ်ဘူး
သိလိမ့်မယ် သူနဲ့ စကားပြောကြည့်ရင်
သူနဲ့ သိလိမ့်မယ် ဂစ်တာအတူတီးကြည့်ရင်
အမှန်တရားအတွက် သိလိမ့်မယ် ယုံကြည်မှုအတွက်
ဘာကြောင့် သူ ခရီးထွက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ သိလိမ့်မယ်
ဒီလိုနဲ့ တအားအားအော်တတ်တဲ့ ကျီးကန်းတွေ များလာပြီ
ဒီလိုနဲ့ တ၀ုတ်ဝုတ်ဟောင်တတ်တဲ့ ခွေးတွေ များလာပြီ
ဒီလိုနဲ့ မကြာခင် ၀ဋ်လည်ပါလိမ့်မယ်
မျက်မှန်တစ်လက်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ယုံကြည်မှုတွေကို ဆွဲဖွင့်လိုက်
ပိုက်ထဲမှာ ခင်ဗျားတို့အကြိုက် မုသာဝါဒတွေ ငြိပါ မလာဘူး
ဒါ ဖျတ်ကနဲ ခဏလာတဲ့ မီးမဟုတ်ဘူး
ဒါ လက်ကနဲ ခဏလင်းတဲ့ ကြယ်မဟုတ်ဘူး
ဒါ ဖျောက်ကနဲ ခဏရွာတဲ့ မိုးမဟုတ်ဘူး
ူသူရေးတဲ့ ကဗျာကို ဖမ်းလို့ မရဘူး
သူရေးတဲ့ ဘလော့ကို ဖမ်းလို့ မရဘူး
သူသမိုင်းသူရေးတဲ့ နေဘုန်းလတ်ကို မင်းတို့ တသက်လုံး ဖမ်းလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် အန်တွန်ချက်ကော့ မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် မာယာကော့စကီး မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် နေဘုန်းလတ် ဟုတ်တယ်
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ သူ့မွေးနေ့ ဟုတ်တယ်
ဒါပေမယ့် နေဘုန်းလတ်ရေ မြို့စားကြီးရေ
ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ငါဆဲမိပြီ .. #@$%!
ဒါပေမယ့် မင်း အမြန်လွတ်ဖို့ ငါဆုမတောင်းဘူး
ဒါပေမယ့် မင်းကို အမြန်လွှတ်ဖို့ ငါတောင်းဆိုမယ်
ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ငါတို့သွားတုန်းက ဖြတ်ရတဲ့ Merlion Park နားက တံတားပေါ်ကို ညနေကရောက်သေးတယ်
ဒါပေမယ့် မင်းကို သတိရဖြစ်အောင် ရဖြစ်လိုက်သေးတယ်
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ မင်းအတွက် ကုသိုလ်ဒါနလုပ်တဲ့သူတွေအကြောင်း ဘလော့တွေမှာ ဖတ်ရတယ်
ဒါပေမယ့် မင်းမပါတဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေက အသံတိတ်ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရသလိုပဲ
ဒါပေမယ့် ငါတို့ နက်ဖြန် ကိတ်မုန့်ခွဲမယ်
ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် အမှတ်တရပါပဲကွာ။
(ကဗျာကို နေဘုန်းလတ်မွေးနေ့အတွက် ညီညီ(သံလွင်) မှပေးပို့သည်)
Labels: ကဗျာ, ခံစားချက်, မွေးနေ့
၂၈နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရှင်နေဘုန်းလတ်သို့ (By ဇင်ကိုလတ်)
မင်း အဖမ်းခံရတယ် ကြားကြားချင်းတုန်းက တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်လား။ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်လားလို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ ဒါနဲ့ပဲ မင်း အကြောင်းပါတဲ့ သတင်းတွေ၊ အသံလွှင့်ဌာနတွေက လွှင့်တဲ့ အသံတွေကို ငါသိမ်းထားတယ်။ မင်းလွတ်လာတဲ့ အချိန် ဖတ်လို့ရအောင်၊ နားထောင်လို့ရအောင်ပါ။ မင်း အထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ အချိန် အပြင်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ သိအောင်ပါ။ အခုတော့ မင်းကို ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘလော့ခ်ကာတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို Free နေဘုန်းလတ်ဆိုတဲ့ ဘလော့ခ်လေးမှာ ဖတ်လို့ ရနေပါပြီ။ တစ်လ၊ နှစ်လလောက်နဲ့ မင်း ပြန်လွတ်မလာတော့ အခုမေလပြီးရင် မင်းကို လွှတ်ပေးတော့မယ် ထင်ခဲ့တယ်။ ဒီ ၂၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို အရင်နှစ်တုန်းကလိုပဲ ဘလော့ခ်တွေပေါ်မှာ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြီးတော့ ဂျီတော့ခ်ပေါ်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကျင်းပနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်ကွာ ထင်သလို မဖြစ်လာခဲ့ဘူး။
မင်း အထဲမှာ ရောက်နေတုန်း ငါလည်း ဘလော့ခ်ကို ကောင်းကောင်းမရေးဖြစ်ပါဘူးကွာ။ မင်း ဘလော့ခ် မရေးနိုင်လို့ ငါလည်း လိုက်မရေးဘူးလို့ ပြောရင် ပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မင်းက “မင်း စောက်ရူးပဲ၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စောက်ပျင်းကြီးပြီး မရေးတာများ ငါ့ကို လွှဲချနေတယ်”ဆိုပြီး ပြောမှာ ငါသိတယ် သူငယ်ချင်း။ မင်းအထဲမှာ ရောက်နေလို့ သံလွင်အိပ်မက်ရပ်သွားတာမျိုး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်သွားတာမျိုး၊ ငါ ဘလော့ခ် ဆက်မရေးတော့တာမျိုးတွေကို မင်း မဖြစ်စေချင်မှန်းငါသိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မင်းရဲ့ ၂၈နှစ်မြောက် မွေးနေ့က စပြီး ငါ ဘလော့ခ်ပြန်ရေးတော့မယ်။ ပိုစ့်တွေ တသီကြီး မရေးနိုင်တောင် တပတ်ကို ပိုစ့်တစ်ခုလောက် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ မင်းရဲ့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ တာဝန်တွေကို ငါဆက်လက်ထမ်းရွက်မယ်။ မင်းရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်တွေကို မင်းကိုယ်စား ငါ ပြောပြမယ်။
မင်း လွတ်လာတဲ့ အချိန်မှာ မင်းနားထောင်ဖို့ မင်းရဲ့ သတင်းတွေကို "ForNPL"ဆိုပြီး ငါ Folderတစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ မင်းလွတ်လာရင် ငါ့ဆီက တောင်းဖို့ မမေ့နဲ့ဦး။ မင်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပြီး မင်းချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့ တူတူ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရပါစေလို့ ငါ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ။ ကဲ . ဟက်ပီဘက်ဒေးပါ သူငယ်ချင်း။
(စာကို နေဘုန်းလတ်မွေးနေ့အတွက် ဇင်ကိုလတ်မှ ပေးပို့သည်)
၂၈ ရက် ၂၈နှစ်မြောက် မွေးနေ့ရှင်သို့ (By နိုင်းနိုင်းစနေ)
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ နေဘုန်းလတ်
သံလွင်မဂ္ဂဇင်း အဖွဲ့သားတွေနဲ့ အပြင်မှာ လူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပေမယ့် နေဘုန်းလတ်နဲ့တော့ မဆုံခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် သံလွင်အဖွဲ့သားတွေထဲမှာ နေဘုန်းလတ်နဲ့ ကျွန်မ ပထမဦးဆုံးခင်ခဲ့သူပါ။ မှတ်မိပါသေးတယ်.... မြန်မာ ပလန်းနက်ဝက်ဆိုက်မှာ စာလေးတွေ စရေးတုန်းက “နေဘုန်းလတ်”ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဖိုရမ်မှာ ခဏခဏမြင်ဖူးခဲ့ပေမယ့် လူချင်းမရင်းနှီးခဲ့ဘူး။ တစ်နေ့တော့ သူ့ဆီက သံလွင်မဂ္ဂဇင်းမှာ စာတွေရေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ရခဲ့တယ်။ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် ကျွန်မတို့ ခင်မင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့.... သူ့ရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် သံလွင်အဖွဲ့သားနဲ့ မွန်းသက်ပန်ကိုပါ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
နံရံလေးထောင့် အမှောင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ ၂၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကို ဖြတ်သန်းနေရသူ
ခန္ဓာသာ အထီးကျန်ပေမယ့် မင်းဝိညာဉ်က အထီးမကျန်ဘူး နေဘုန်းလတ်
မင်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံး၊ မင်းကိုခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံး
အမေ့ဝမ်းတွင်းက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျွတ်ထွက်လာသလိုမျိုး
အခုလည်း အမှောင်ခန်းထဲကနေ မင်းအမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ....
(စာကို နိုင်းနိုင်းစနေ(http://nineninesanay.blogspot.com/2008/06/blog-post_28.html) ထံမှ ရယူသည်)
သူငယ်ချင်းနေဘုန်းလတ် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်ပါစေလို့ ရည်စူးပြီး ဒီနေ့ မနက်စောစော ရွှေတိဂုံ ခြေရင်းက သွေးဆေးကန်မှာ ဘလောက်ဂါသူငယ်ချင်းများ အားလုံးကိုယ်စား စာကလေး၊ ခို၊ ငါးလေးတွေလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ။
(ပုံနှင့်စာများကို ဘာညာဘာညာ (http://barnyarbarnyar.myanmarbloggers.org/2008/06/happy-birthday-nay-phone-latt.html) မှ ရယူသည်)
Labels: ခံစားချက်, သတင်း, မွေးနေ့
ဘေဘီဗိုက်တာ၊ နေဖုံးလတ်၊ မြို့စားမင်း
သူငယ်ချင်း မင်းကိုမတွေ့တာ အတော်တောင် ကြာနေပါပကော။
လှိုင်းလွန့်တွေ လူးထတဲ့ အခါ
(ကဗျာကို ဘလာဂေါက် (http://zawzaw.myanmarbloggers.org/2008/06/blog-post_28.html) ထံမှ ရယူသည်)
Labels: ကဗျာ, မွေးနေ့
Happy Birthday to Ko Nay Phone Latt (By Pinkgold )
Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့မွေးနေ့ကို Coffee King မှာ ကျင်းပတယ်တဲ့။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ ဘလောဂ့်စရေးကာစ အချိန်ပေါ့။ နာမည်ကြီး ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ဘလောဂ့်တွေကို အသဲအသန်လိုက်ဖတ်နေချိန်။ ဘလောဂ့်တွေမှာ သူများတွေ ဘာတွေရေးကြလဲလို့ စူးစမ်းလေ့လာနေချိန်။ မမယ်လိုဒီမောင် ရဲ့ ဘလောဂ့်ကနေတစ်ဆင့် ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ 27 နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို အမှတ်မထင် သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
"နေဘုန်းလတ်" ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ ကျွန်မနဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ပလန်းနက်ဖိုရမ်မှာနေဘုန်းလတ်၊ ညီလင်းဆက်၊ ဟနစံ၊ ကိုသံလွင် (ကလိုစေးထူး) တို့ဆိုတာ ထက်မြက်တဲ့ စာပေးအရေးအသားတွေနဲ့ နာမည်ကြီး Forumer တွေမို့ ကျွန်မ လေးစား အားကျခဲ့ရတဲ့ သူတွေပါ။ ဟော.. ခု ကျွန်မ ဘလောဂ့်ရေးပြန်တော့လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူက ဘလောဂ့်ဂါ ဖြစ်လို့နေပြန်တယ်လေ။ သူ့ရဲ့ ၂၇ နှစ်မြောက်မွေးနေ့တုန်းက သူနဲ့ မရင်းနှီးသေးလို့၊ သူငယ်ချင်း မဖြစ်သေးလို့ Cbox မှာပဲ Happy Birthday သွားအော်ခဲ့ရတယ်။ ဒီအကိုကြီးရဲ့ ၂၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာတော့ ငါလည်းပါဝင် ဆင်နွှဲနိုင်ကောင်းရဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတော့ ၀င်ခဲ့မိတယ်။
ဒါပေမယ့်..... ဒါပေမယ့်.... ဒါပေမယ်.....
မထင်မှတ်တာတွေ၊ မကြုံဖူးတာတွေ၊ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ လက်မခံချင်တာတွေကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး လက်ခံလိုက်ရတယ်။ ဟော.. ခုတော့ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ မွေးနေ့ပွဲ၊ မွေးနေ့ရှင် မသိတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းကို ကျွန်မတို့တွေ ကျင်းပပြုလုပ်နေရပါလား။ မွေးနေ့ရှင် တစ်ယောက်ကတော့ သူရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လိုများ ရှိနေပါလိမ့်။
သူ့ရဲ့ မနှစ်တုန်းက မွေးနေ့ကို သတိရနေမလား.........
စိတ်မှန်းနဲ့ တမ်းတပြီး.. ဘုရားကို ဦးခိုက်ဆုတောင်းနေမလား......
အရာရာကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းပဲ ထင်နေမလား.......
ဒီနေ့ ဇွန်လ (၂၈) ရက်နေ့ဟာ ဘလောဂ့်ဂါ သူငယ်ချင်း ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ (၂၈) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါ။ မွေးနေ့ရှင် မသိနိုင်ပေမယ့် ကျွန်မ ရင်ထဲကတော့ မွေးနေ့ရှင်အတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။
HAPPY BIRTHDAY KO NAY PHONE LATT!
MAY YOU BE FREE AS SOON AS POSSIBLE!!
ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ဒီနေရာလေးမှာ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆုတောင်းတွေ လုပ်ထားကြပါတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါတွေအတွက်၊ ဘလောဂ့်ဂါမဟုတ်တဲ့ သူတွေအတွက် အကျိုးပြုစာပေါင်း များစွာကို ရေးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ချစ်ခင်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ Blogging အပါအ၀င် တစ်ခြား IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေကို လူထုကြား ချပြချင်တဲ့ စေတနာကောင်းတဲ့ သူ၊ လူတွေကို ကူညီတတ်တဲ့၊ ခပ်ပြုံးပြုံးနေတတ်တဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဘလောဂ့်လာဖတ်တဲ့ သူတွေလည်း comment လေးတွေရေးပြီး ဆုတောင်းပေးစေချင်ပါတယ်။
(စာကို Pinkgold (http://www.cuttiepinkgold.info/2008/06/happy-birthday-ko-nay-phone-latt.html) ထံမှ ရယူသည်)
ငါဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခုထဲမှာ ... (By နေဘုန်းလတ် )
(၂၀၀၇ ခုနှစ် အသက် ၂၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် နေဘုန်းလတ် ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့သောကဗျာကို www.nayphonelatt.net မှ ပြန်လည် ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်)
ငါ့အတွက် ဘာမှမကြာလိုက်သလို ...။
နောင်တလို့ အမည်တပ်ပြီး စုထားလိုက်တယ်။
ငါဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခုထဲမှာ ...။
နောက် ... ကမ္ဘာလောကကြီးကိုထမ်းပိုးဖို့
ပျော်ခဲ့ ငိုခဲ့ ပြုံးခဲ့ မဲ့ခဲ့
နိုင်ခဲ့ ရှုံးခဲ့ တက်ခဲ့ ကျခဲ့
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်တိုင်ရေး, သူ့လက်ရာ, မွေးနေ့
မနက်ဖြန် ဇွန်လ( ၂၈ ) ရက်နေ့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အကိုကြီး ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ ၂၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပါ။ သူ ညီအကိုလို ချစ်ခင်သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ အိုအေစစ်မောင်ပွတ်အတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရပို့စ် တင်ပြီးကတည်းက သူ့ရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကို ဖတ်ရှုခွင့်မရခဲ့တာ အခုဆို သူ့မွေးနေ့ ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
မိသားစုကို သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းလှတဲ့ အကိုတစ်ယောက် မွေးနေ့မှာ မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ချင်မှာ သေချာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ဘလော့ဂါညီအစ်ကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ သတိရနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်မတို့တွေ အားလုံးကလဲ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အော်ဟစ်ရီမောတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ရီသံတွေကို ကြားယောင်မိရင်း ဇွန် ၂၈ ကို ကျော်ဖြတ်ရမှာပါ။ ၂၈ နှစ်ပြည့် မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ သူ့လက်ကနေ လွှတ်ချပေးမယ့် ကဗျာတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်ပုဒ်ကိုလဲ ဒီအချိန်မှာ တမ်းတမိပါတယ်။
ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိနေပေမယ့်လည်း နောင်နှစ်နောင်နှစ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Happy Birthday လို့ ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ နောင်လာမယ့် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေမှာ လွတ်လပ်မှုအပြည့်နဲ့ သူမြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာတွေကို ဖန်တီးခွင့်ရပါစေ။ သူချစ်တဲ့ မိသားစုဆီကိုလဲ အမြန်ဆုံး ပြန်လာခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကဗျာလေးကတော့ အကိုနေဘုန်းလတ် မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရပါ။
သူ သို့မဟုတ် နေဘုန်းလတ်
လူ့ဘ၀ရဲ့ ၂၈ နှစ်တာခရီးတလျှောက်
`နေဘုန်းလတ်´သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
ကဗျာကို ဆုသက်လင်း (http://suthetlin.blogspot.com/2008/06/blog-post_27.html) မှ ရယူသည်။
ကဗျာကို နေဘုန်းလတ်မွေးနေ့အတွက် မိုးလှိုင်ညမှ ပေးပို့သည်။
(ဤပို့စ်ကို ခွန်မြလှိုင် http://khunmyahlaing.blogspot.com/2008/05/blog-post_08.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်)
နေဘုန်းလတ်ကို ဖမ်းဆီးထားခြင်း ၃ လပြည့်အဖြစ် သူ၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဇင်ကိုလတ်မှ သံလွင်အိပ်မက် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁ တွင် ရေးသားထားသော အောက်ပါ ဆောင်းပါးကို ကူးယူဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း နေလို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စသည်ဖြင့် ကိုယ်နှင့် နီးစပ်ရာကို ဆက်ဆံလုပ်ကိုင် ကြရပါသည်။ ကျွန်တော်ဆိုလျှင် အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀တုန်းက သူငယ်ချင်း၊ စင်္ကာပူမှာ ပေါ်လီတက်တုန်းက သူငယ်ချင်း၊ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်း၊ နောက်ပိုင်း လူမှုရေးကိစ္စတွေလုပ်တော့ သိလာရတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ သူငယ်ချင်း။ သူငယ်ချင်းပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် တော်ရုံသည်းမခံနိုင်ပဲ၊ စိတ်တူကိုယ်တူ မရှိပဲ ဘယ်သူငယ်ချင်းနှင့်မျှ သူငယ်ချင်း သက်တမ်း၁၅နှစ်လောက် မရှည်ကြာနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်မှာ အဲဒီလို ခင်သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သာ ရှိ၍ သူ၏နာမည်မှာ နေဘုန်းလတ်ဖြစ်သည်။
နေဘုန်းလတ်ဆိုသည်မှာ သူမဂ္ဂဇင်းတွင် စာတွေ စရေးသော ၂၀၀၂ခုနှစ်လောက်မှာ ပေးခဲ့သည့် ကလောင်နာမည်၊ သူဘလော့ခ်ရေးသောအခါ သုံးသည့်နာမည်၊ သူ့ကို လူအများသိသောနာမည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်းကတော့ တစ်ယောက်ကျောင်းနာမည်ကို တစ်ယောက်က အပြည့်ခေါ်သည်။ သူ၏ နေဘုန်းလတ်နာမည်နှင့် မဂ္ဂဇင်းထဲတွင် ပါလာသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ပြသည်။ ကျွန်တော် ပေါ်လီကျောင်းအပိတ် ရန်ကုန်ပြန်သွားသော အချိန်တွင် ဖြစ်မည်ထင်၏။ EDUCATIONဆိုသည်ကို Eဆိုတာ ဘာ၊ Dဆိုတာ ဘာနဲ့ တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ထားတာပါ။ သူရေးသော အခြား ဆောင်းပါးများမှာလည်း ဤလို ပုံစံမျိုးတွေပဲ ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းသူ့တွင် အနုပညာပိုးများ ကိန်းအောင်းနေသည်မှာ ၁၀တန်းကျောင်းသားဘ၀လောက် ကတည်းက ဖြစ်မည်။ သူ့ဦးကြီးဖြစ်သူမှာ စာရေးဆရာ ဦးမင်းလူတို့နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့ဦးကြီး ကဗျာများနှင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော် စတင်ခံစားခဲ့ရသော သူ၏ ပထမဆုံး အနုပညာလက်ရာမှာ ၉တန်း၊ ၁၀တန်း ကျောင်းသားဘ၀က ဖြစ်သည်။ သူဆွဲသော ကျောင်းစာနှင့် ပတ်သက်သော ပုံများမှာ အရမ်းလှပြီး အရမ်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိလှသည်။ ၁၀တန်းကျောင်းသားဘ၀က သူဆွဲသော Bioမှ ငှက်ပျောပင်ပုံမှာ လှလွန်း၊ တူလွန်း၍ ကျူရှင်တစ်ခုလုံး ချီးကျူးသည်အထိဖြစ်သည်။ ၁၀တန်းအောင်ပြီးချိန်တွင် သူ၏အနုပညာကို သုံးရန်အတွက် အခွင့်အရေးရခဲ့၏။ ကျွန်တော်တို့ ဒြပ်မဲ့ကမ္ဘာဆိုသော ကဗျာစာအုပ်ထုတ်သည့်အခါ သူ့ကို မျက်နှာဖုံးစာလုံး ပန်းချီဆွဲပေးဖို့ အတွက်ရော ကဗျာတစ်ပုဒ်စ နှစ်ပုဒ်စ ရေးပေးဖို့ပါ ပြောသောအခါ သူက ချောချော ချူချူ လက်ခံသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်က “အလင်းဖြူ”၊ သူက “နွေလေ”ဟု ကလောင်ယူကာ ညီညီက “ခေလွန်း”၊ ကိုငယ်က “တေးသီ”ဆိုသော နာမည်များဖြင့် ကဗျာများရေးခဲ့၏။ ပြီးတော့ သူက ပြောသေးသည်။ နွေလေဆိုတာ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ တိုက်တဲ့လေဆိုတော့ အေးအေးလေးပေါ့ဆို၍ ကျွန်တော်ကလည်း အားကျမခံ အလင်းတွေကတောင် အဖြူရောင် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကမ္ဘာလောကကြီး ဘယ်လောက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မလဲလို့ အဲဒီ အချိန် ငယ်စဉ်ကာလအတွေများနဲ့ ပြန်ပြောခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ပေါ်လီပြီးသောအခါ သူကလည်း Civil Engineer ဖြစ်နေ၍ အလုပ် ၀င်နေပြီဖြစ်၏။ ဒါပေမယ့် သူအလုပ်လုပ်သော ပြည်လမ်းပေါ်မှ Condoကြီး ပြီးစီးသွား၍ အလုပ်မရှိဖြစ်သွားသည့်အတွက် ကျွန်တော်ရှိသော စင်္ကာပူကို (မလာချင်လာချင်နှင့်) အလုပ်လာရှာပြီး တစ်လအတွင်း ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ အလုပ်တစ်ခုရခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ရှိနေ၍သာ သူစင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး တစက်မှ မပျော်ဟု အမြဲပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန်သာ သူအမြဲစိတ်စောနေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသာ သူ့နိုင်ငံ သူ့နိုင်ငံမှာ ပဲ သူပျော်သည်တဲ့လေ။ ငါတို့လည်း ဒီမှာ ပျော်လွန်းလို့ နေတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် နေသင့်တဲ့ အချိန်တချိန်အထိတော့ နေရဦးမည် ဖြစ်သည့် အကြောင်း ပြောပေမယ့်လည်း သူကတော့ မြန်မာပြည်သို့ ၂၀၀၆ခုနှစ်အစပိုင်းတွင် အပြီးပြန်သွားခဲ့သည်။ သူမပြန်ခင်စပ်ကြား သံလွင်အိပ်မက်ကို အတူတူတွဲလုပ်နေရင်း မြန်မာပြည်မှ စံပယ်ဖြူကဲ့သို့ မဂ္ဂဇင်းများတွင်လည်း နေဘုန်းလတ်၏ စာမူများ မကြာခဏဆိုသလို ပါလာ၏။ သူရေးသော ဆောင်းပါးများမှာ လူငယ့်အတွေး၊ ကမ္ဘာလောကကြီး သာယာလှပဖို့၊ လူသားအချင်းချင်း စာနာဖို့ စသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သည်။
အလုပ်မှ ခွင့်ရ၍ ၂၀၀၆ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်သော အချိန်တွင်တော့ နေဘုန်းလတ်က သူ၏ မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးများကို တစုတစည်းတည်း ပေါင်းစု ထုတ်ဝေရန် လုပ်နေသည်။ ကျွန်တော့်ကို သူ့စာအုပ်အတွက် စာရေးဆရာကိုတာ ရေးပေးထားသော အမှာစာကို ပြသည်။ တခြားစာသားများ သေသေချာချာ မမှတ်မိပေမယ့် “နေဘုန်းလတ်ဆိုသော လူငယ်သည် သူတွေးမိသော အကြောင်းများကို သူများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားစွာဖြင့် ရဲရဲတင်းတင်း ချပြရဲလေသည်”ဟု ကိုတာက အမှာစာရေးဖူးလေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အားလပ်ချိန်များတွင် လူငယ်သဘာဝ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြင့် ဘယ်လို၊ ငါတို့ နိုင်ငံမှာဆို ဘယ်လို ပုံစံမျိုး လုပ်နိုင်မယ်၊ ဘယ်လူမျိုးတွေကဖြင့် ဘယ်လို၊ ငါတို့ လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ဘယ်လို မြှင့်တင်မယ် စသဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအလယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မျက်နှာမငယ်စေရန်အတွက်၊ ကျွန်တော်တို့ မွေးလာမယ့် နောက်လာနောက်သား အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် စသည်တို့ကို အမြဲတစေ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသည်။
၂၀၀၆နောက်ပိုင်း မြန်မာဘလောခ့်တွေ ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလအကုန် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင်တော့ သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၉)ထွက်ပြီးကာစ ဖြစ်၍ အားလပ်ချိန်လေးများ ရှိနေသော ကျွန်တော်နှင့် နေဘုန်းလတ်တို့သည် ရင်တွင်းဖြစ် စကားလုံးများကို ချရေးရန်၊ အိပ်မက်များကို အသက်သွင်းရန်၊ သိထားသည်များကို မျှဝေရန် ဘလော့ခ်တစ်ခုစီ လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်တွင် ကျွန်တော့်ဘ၀ အကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းအကြောင်း၊ စင်္ကာပူအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း၊ စုံစီနဖာ ချရေးခဲ့၍ နေဘုန်းလတ်၏ ဘလော့ခ်တွင်တော့ လူငယ်များ ချက်တင်ထိုင်သည့်အကြောင်း၊ ဘလော့ခ်အကြောင်း၊ ထုံးစံအတိုင်း အတွေးပါသော ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုများကို အလျဉ်းသင့်သလို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲသည်နောက်ပိုင်း Onlineပေါ်မှ ဘလော့ခ်ကာ သူငယ်ချင်းများ စုပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံလို အင်တာနက် တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် မသုံးနိုင်သော နိုင်ငံမှ လူများအတွက် ဘလော့ခ်များပေါ်မှ ဘလော့ခ်ပိုစ့်များကို ဝေမျှပေးရန် “အနာဂါတ်လှိုင်း၏ ပုံရိပ်များ”ဟူသော ဘလော့ခ်စာအုပ် ထွက်လာစေဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ (အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ယခုထိထွက်ရှိနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။) နေဘုန်းလတ်နှင့်တကွ သူငယ်ချင်း ဘလော့ခ်ကာများသည် "Why do we blog"ဆိုသော ဘလော့ခ် Seminar တစ်ခုကို Myanmar Infotechမှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုနောက်ဆုံး ကျွန်တော်၊ နေဘုန်းလတ်နှင့် သူငယ်ချင်းဘလော့ခ်ကာများ အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် တကမ္ဘာလုံးတွင် တကွဲတပြားစီဖြစ်နေသော မြန်မာဘလော့ခ်ကာများ စုစည်းမိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး Myanmar Blogger Society (MBS)တစ်ခု တည်ထောင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခြင်း မရှိသော၊ မှောင်ခို၊ အောက်လမ်းစီးပွားရေးများကို မလုပ်သော၊ ဘိန်း၊ ကိုကင်း စသော မူးယစ်ဆေးဝါးများကို မသုံးဖူးသော၊ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းသော မည့်သည့်အလုပ်ကိုမှ မလုပ်သော ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်း နေဘုန်းလတ် တစ်ယောက် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှ မရှိပဲ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်မှာ ယခုဆို ၂လကျော် ၃လထဲ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်လိုပဲ ချုပ်နှောင်ခံထားရပါစေ၊ ဘယ်လိုပဲ တားဆီးခံထားရပါစေ ကျွန်တော်လွတ်ချခဲ့တဲ့ မြို့တော်တွင်တော့ ဘလော့ခ်ကာ တစ်ယောက်၏ စိတ်ကူးများ ကွန့်မြူးနေဆဲ၊ နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်၏ တိုင်းပြည်ကို ချစ်သည့်စိတ်များ နိုးကြားနေဆဲ၊ လူငယ်တစ်ယောက်၏ အိပ်မက်များ နွေးထွေးနေဆဲ၊ သူ့Cboxထဲ၌ သူလွတ်မြောက်ရန်အတွက် အစဉ်ဆုတောင်းနေကြဆဲ၊ လူငယ်များကို ကောင်းစေချင်သည့် အရေးအသားတွေ ရှင်သန်နေဆဲ၊ စာရေးဆရာတစ်ယောက်၏ သူရူးသွပ်သော အနုပညာများ ကိန်းအောင်းနေဆဲ ဖြစ်နေပါတော့သည်။
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် ၂ ၊ အတွဲ ၁ ဖြန့်ချီ
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ကတည်းက ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဘလော့ဂါ စာရေးဆရာ နေဘုန်းလတ် အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁ ကို မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က ဖြန့်ချီလိုက်ပါတယ်။ သံလွင်အိပ်မက်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး ယခင်က ၁၁ စောင်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ရာ အခု ပုံစံအသစ်နဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်ဝေလိုက်တာကတော့ ၁၂ စောင်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေဘုန်းလတ် ထိမ်းသိမ်းခံထားရပေမယ့် သူ့ရဲ့ကဗျာအသစ်တစ်ပုဒ်နဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဖေါ်ပြဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်းမှာ ထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အခြားစာရေးဆရာများရဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာလည်း နေဘုန်းလတ် အကြောင်းတွေ သတိတရ ထည့်သွင်းရေးသားထားကြပါတယ်။
နေဘုန်းလတ်က ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရသူ မိသားစုကို သံလွင်အိပ်မက်ထွက်ပြီလားလို့ သတိတရမေးလိုက်တဲ့စကားကြောင့် သံလွင်အိပ်မက်ဝိုင်းတော်သားတွေအနေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်လို့ အယ်ဒီတာတွေက ပြောပါတယ်။ အယ်ဒီတာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ညီညီ(သံလွင်)က သူ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်မှာ သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်းအကြောင်း သတင်းပေးရင်း “ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့ အင်မတန်အားထားရပြီး အနုပညာ ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ အယ်ဒီတာ နေဘုန်းလတ်တစ်ယောက် သံတိုင်တွေ နောက်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ ရောက်သွားခဲ့ရတာကတော့ သံလွင်အိပ်မက်အတွက် အတော့်ကို ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ နေဘုန်းလတ် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပြီး သံလွင်အိပ်မက်အတွက် စာတွေ အတူတကွ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။
Labels: ကဗျာ, သတင်း, သူ့လက်ရာ
(ဘလော့ခ်ပို့စ်ကို http://myintzay.blogspot.com/ဤနေရာမှ ရယူပါသည်။)
၂လပြည့်တဲ့ ရက်ပေါင်း ၆၀
အနုပညာကို ခုံမင် ရူးသွပ်သူ တစ်ယောက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မသေခင် “ပရိသတ်ကို လိမ်တာ အကြီးဆုံး ရာဇ၀တ်မှုမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ပေးတယ် ” ဆိုပြီး သေတမ်းစာ ရေးခဲ့တဲ့ Kurt Cobain ရဲ့ အနုပညာနဲ့ ပရိသတ် အပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ထားကို လေးစားလို့ သူ့ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ စာအုပ် ဖတ်ချင်တယ်လို့ ထောင်ဝင်စာ တွေ့လာသူ မိခင်ကို ပူဆာတဲ့ တေးရေးသူ
အနုပညာကို ပီယဆေးလို အလွဲမသုံး ဘဲ ခံစားချက် စစ်စစ်နဲ့ ထုဆစ်ခဲ့လို့ လိပ်ပြာသန့်တယ် ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါ အနုပညာသည်
ကောင်းကင်မဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင်စားရင်း ပျံသန်းချင်တဲ့ တောင်ပံ တစ်စုံ အတွက် ကောင်းကင်သစ် ကို ဖန်တီး ဖွင့်လှစ် ခဲ့တဲ့သူ
ခုတော့ လူက သံတိုင်နောက်မှာ ၂လတာ.. အချိန်တွေ ကြာလင့် ခဲ့ပြီ.. ဒါပေမယ့် နင့်အတွေးတွေ စိတ်ကူးကောင်းကင်ထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီး ပျံသန်း နေနိုင်ပါစေ… ငြိမ်းချမ်းပါစေ သူငယ်ချင်း..
မိုးကောင်းတုန်းတော့ ရွာစေဦးပေါ့… မိုးဟာ အမြဲ မရွာနိုင်ပါဘူး …
( ခွန်မြလှိုင် http://khunmyahlaing.myanmarbloggers.org/2008/03/blog-post_29.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြသည် )
(နေဘုန်းလတ်၏ လက်ရေးမူရင်းနှင့် စာမူကို ခွန်မြလှိုင်မှ ပေးပို့ပါသည်)
Labels: ကိုယ်တိုင်ရေး, သူ့လက်ရာ
နေဘုန်းလတ်ဘလော့ ဒိုမိန်းသက်တမ်းပြည့်သွားဖြင့် ကြည်...
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် ၂ ၊ အတွဲ ၃ တွင် နေဘုန်းလတ်၏ ကဗ...